MAXAA DHALIYAY XIISADDA KA TAAGAN QUNSULLIYADDA SOOMAALIYEED EE DUBAI !
Mogadishu,17th March 2004
Tan iyo markay burburtay nidaamka Dawladdii Maxamed Siyaad Barre horraantii 1991 iyo ilaa iyo waqtigan la joogo ee sanadkan 2004, waxay magaalada Dubai oo ku taala dalka Imaaraadka u noqotay goob muhiim u ah kobcinta dhaqaalaha iyo nolosha shacabweynaha Soomaalida, waayo waa suuq u furan adduunyada inteeda kale, cid kastana ay xur u tahay inay keento ama iibiso badeecad alaale badeecadii ay doonto. Waxay Dubai noqotay barta isku xirta duulimaadyada dayaaradaha taga ama ka yimaada Soomaaliya, oo usbuucii ay jiraan 8 duulimaad oo kala duwan.
Baayac mushtarka u kala socda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ka sokow, Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkaa waxaa iminka ugu furan Dubai Hodheelo la jiifto,Shirkadaha Dayaaradaha,Maktabyada Xawaaladaha, dukaamada lagu iibiyo dharka iyo maacuunka , dahab-layaal,maqaayado kala duwan,goobaha lagu ijaaro gawaarida khaaska ah iyo xafiisyada fuliya mucaamalaadka Viisooyinka,iwl (Public Relation Offices).
Magaala ceynkaa ah, oo Soomaalidu sidaa ugu camiran tahay, waxay dabcan dadku u baahan yihiin Qunsuliyad u fulisa waxyaabaha ay doonayaan. Xaruunta Safaaradda oo ku taala Caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi waxay u jirtaa Dubai qiyaastii masaafo dhan 167 km,waana meel ku fog dadka intiisa badan . Sidaas awgeed ayeey Qunsulliyaddu ugu yeelatay muhimad gaar ah jaalidda Soomaalida. Waxaa kaloo jirta, xusidna mudan nolosha Abu Dhabi (Ijaarka iyo maciishadda) oo ka yara qaalisan dalka intiisa kale, oo dadka ay maciin u tahay inay degaan magaalooyinka maciishada jaban ee Sharjah,Cajmaan iyo Ras-Ul-Khaimah iyo Umul-Quweyn oo dhamaantood u dhow Dubai .
Hadii aan u soo noqono mowduuca qoraalkan oo ah xiisadda ka ooggan Qunsulliyadda bilahan danbe waa mid ku qotonto u-adeegga dadka ay Qunsulliyadda u furan tahay,qaybinta shaqada Xafiiska iyo dhaqaalaha xoogga leh ee Qunsulliyadda ka soo gala jaaliyadda . Saraakiisha loo soo bedelay inay Diploomaasiyiin ka noqdaan Qunsulliyadda oo kala ah First Secretary (Ex-Col.) Maxamed barrow Geedi iyo First Secretary Cabdinaasir Aadan (Seerjito) waxay rabaan,sida laga soo wariyay, inay hawsha dhinacooda ka qabtaan, oo ay sida caadada ahaan jirtay la wadaan Qunsulka Maxamed Yarow wixii hawl ah ee la qabanayo, lana siiyo xaqa ay wax ku fulinayaan (Saxiixa).
Waxay ku doodayaan oo sida dhabta ahna ay ahayd, in markii uu Maxamed Yarow ahaa ku-xigeenka Qunsulkii Guud ee hore oo la oran jiray Cabdulqaadir Xersi Ismaaciil, uu Maxamed Yarow guud ahaan hawsha Qunsulliyadda siday u dhan tahay isagu kaligii wadi jiray . Marka uu iminka dalacayna uu u diiday iyaga xaqa ay u leeyihiin inuu midkood ama labadooda wax saxiixaan, hawshana la wadaan .
Arrinku markuu halkaa gaaray oo dhawr jeer lagu sigtay saraakiisha sare ee Qunsuliyaddu inay gacanta isula tagaan, ayaa Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dawladda KMG ah Yuusuf Xasan ibraahim (Dheeg) uu dhowaan u soo qoray qoraal rasmi ah madaxa Safaaradda Soomaalidu ku leedahay Abu Dhabi Xuseen M. Bulaale (Daqare),kaas oo lagu qaybiyay shaqada Qunsulka Guud iyo labada Qunsul Xigeen.
Laakiin sida muuqata qaybintaa ma noqon mid cajabisa Qunsulka Guud. Waxaa markaa kadib dhamaantood looga yeeray Xamar,si loo kala saaro, halkaa oo labadii Qunsul Xigeen ay ku soo galeen Muqdisha, lakiin ma aanu galin Xamar Mudane Maxamed Yarow,sababtu si kastaba ha ahaatee.